Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် အပြင်ဘက်တွင်မီးအိမ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် အပြင်ဘက်တွင်မီးအိမ် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
ကျနော်တို့အထူးပြုတဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများမှာ အပြင်ဘက်တွင်မီးအိမ်ကျွန်ုပ်တို့ပစ္စည်းများ .Most ရေခြားမြေခြားတင်ပို့ရောင်းချကြသည်ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုထောက်ပံ့သောငါတို့အဘို့အ customers.Moreover ပိုပြီးအရည်အသွေး, အထောက်အပံ့နှင့်ငွေကြေးတတ်နိုင်မှုနှင့်အတူထုတ်ကုန်တွေထုတ်လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်စေကြပါပြီကြိုဆိုဖြစ်ကြပြီးကျနော်တို့အစမ်းအမိန့်ထုတ်ကုန်သောသင်တို့၌စည်းရုံးသိမ်းသွင်းမယ်လို့ယုံကြည် ကျနော်တို့ဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုင်းများအတွက် market.We ကြိုဆိုကြောင်းအမိန့်အဘို့အတန်ဖိုးကိုအဖြစ်အသေးစားနှင့်အကြီးစားဖောက်သည်ထံမှနှစ်ဖွဲ့ / OEM အမိန့်ရှိပါတယ်ရာပူဇော်သက္ကာကိုကြသည်။
ပုံစံ - H5 SBSL 15° 180-250W
ဤမြင့်မားသောမြင့်မားသော LED Illumination light များသည်ပြင်းထန်သောလိုအပ်သည့် application များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်,ကြီးမားသောinspectionရိယာစစ်ဆေးခြင်းများအတွက်စနစ်တကျ illumination.ဤမြင့်မားသောတောက်ပသောအစက်အပြောက်အလင်းများသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအိုးအိမ်တွင်ပျော့ပျောင်း။ ပင်အလင်းရောင်ပေးသည်.ရှည်လျားသောအလုပ်လုပ်အကွာအဝေးပုံရိပ် applications များအဘို့အသင့်လျော်,LEDs များသည်တိကျမှန်ကန်သောပစ်မှတ်ထားသောစနစ်နှင့်အလွန်ကိုက်ညီပြီးအလင်းရောင်အလွန်အမင်းပင်ခံနိုင်သည်.
150W မှ 300W LED အလင်းရောင်နှင့် ၇ ခုကိုသာအာရုံစိုက်ပါ.1 ကီလိုဂရမ်
အဓိကအားဖြင့်ဖန်မှန်ဘီလူးနှင့်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းအိုးတို့ကို အသုံးပြု၍ အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများတွင်လုံခြုံစွာနှင့်တာရှည်ခံသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.ledlightfixtures.org/my/outdoor-spotlights.html
အပြင်ဘက်တွင်မီးအိမ် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ အပြင်ဘက်တွင်မီးအိမ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ